बैठक मानिसहरू बच्चाहरु संग एक परिवार सुरु गर्न
हाम्रो समाजमा छ, त्यहाँ छ एक स्टीरियोटाइप भनेर मात्र एक आमा एक्लै हुन सक्छ. मा एक परिवार, पिता सामान्यतया खडा गर्न अर्को छोरा वा छोरी । वास्तवमा, प्रत्येक व्यक्तिको जीवन विकसित अलग । केही बालिका सोच्न बैठक पुरुष संग छोराछोरीलाई । कसरी ठूलो एक विचार छ र कसरी यो कार्यान्वयन गर्न । यो मुख्य समस्या यस लेखमा छलफल. तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, अवस्था यस्तो छ भनेर तिनीहरूले देखा रूपमा एकल पुर्खाहरूले.
के हो को नोकसान भइरहेको एक अद्भुत एकल व्यक्ति? यो त्यही गम्भीरता र विश्वसनीयता । सत्य । तर, यो समस्या हुन सक्छ निम्नानुसार: निस्सन्देह, म गर्न सक्छ अक्सर एक जोडी पाउन एकल पुरुष लागि बच्चाहरु संग उल्लेख गर्न, आनन्द को आफ्नो छोराछोरीलाई । एकाकीपनको, किनभने यो धेरै अरोचक. एक मानिस भने रहन्छ त्यो बाटो, उहाँले मेहनत गर्नुपर्छ कायम गर्न आफ्नो अपूर्ण परिवार । शायद, एक महिला काम गर्दैन एक टीम मा, एक मानिस पाउन गर्दैन कि सबै मा निर्भर गर्दछ, आफ्नो काम छ । उदाहरणका लागि, एक विशेष मिस्त्री दिन को समयमा धेरै महिलाहरु संग, जसलाई निजी कार । मात्र पोप पूरा गर्न सक्छन् मा कुनै पनि खुद्रा विसर्जन.
तपाईं बेच्न सक्छन्, हामीलाई कल्पना लुगा वा बेबी पाउडर र सफाई उत्पादनहरु
सही उम्मेदवार गर्न ध्यान आकर्षित गर्न आफैलाई तपाईं इरादा पाउन एक जीवन साथी । मनोरञ्जन पार्क, फुटबल स्टेडियम, छोराछोरीलाई गरेको थिएटर खेल, चलचित्र — यहाँ तपाईं एक पाउनुहुनेछ विदुर को एक जवान मानिस वा एक तलाकशुदा मानिस संग छोराछोरीलाई । म सिर्फ हेर्न आवश्यक छ । हामी शायद पूरा मा एक चिकित्सा सुविधा — स्वाद नभएको, तर यदि बच्चा बिरामी छ, त्यसपछि पिता सञ्चालन हुनेछ, उपचार प्रदान कि आमा त्यहाँ छैन. यसबाहेक, यो सजिलो कुराकानी सुरु गर्न क्लिनिक मा, सोध्न बारेमा केहि आइमाइ गरेको नियुक्ति कार्ड, लाइन मा प्राप्त वा दबाइ लिन.»एक मानिस एक बच्चा संग भेट्न एक महिला»- विज्ञापन क्षति इन्टरनेट मा: मा डेटिङ साइटहरु वा सामाजिक नेटवर्क व्यवस्थापन गर्न । छन् विशेष संसाधन जस्तै, छ कहाँ»पोप?»बावजुद नाम, यो परिचय आमा र बुबाले छोराछोरी हुर्काउन गर्ने एक्लै । कठिनाई यो गर्न»बाहिर आंकडा»को एकल पिता, छैन जसले आमा»दिनुभयो आमा»र एक पैदल लागि गए संग आफ्नो छोरा वा छोरी । यो लेखिएको यो । सायद एक मुक्त मानिस अग्रसर हुनेछ मा बैठक । कसरी गर्न सही कुरा हो । कायम इमानदारी को पहिलो मृत पत्नी वा भेट्टाउने एक आमा को लागि एक बच्चा छ । यो एउटा जटिल प्रश्न छ । पहिलो नजर मा, यो लाग्न सक्छ कि एक व्यक्ति प्रेम गर्नुपर्छ केवल एक हुन, आफ्नो नाम र वर्ष को जीवन अब वर्तमान मा ग्रेनाइट. एक महिला लागि तयार हुनुपर्छ गर्न एक मानिस आउन सीधा एक मिति संग एक बच्चा छ । यो सबै छैन. यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ पाउन एक साधारण भाषा संग एक सानो व्यक्ति । यदि यो काम गर्दछ, यो पोप हुनेछ गर्न प्रकारको छ । अरू सबै छ एकदम सामान्य. बस ज्ञान र संचार संग एक विशिष्ट व्यक्ति । तिनीहरूले हुन सक्छ अनुभवी र जिम्मेवार अरूलाई भन्दा
← र मेक्सिकन महिला र कसरी मिति तिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रेम
ब्राजिलका संग अनलाइन गर्ल्स →